Zana-bozaka - fanoherana
Hatsarana sy fahasalamana Piggy bank of folk recipes
Sakafom-boankazo - fananana sy endriky ny medikaly ampiasaina
Fony mbola zaza ny zaza dia fantatry ny ankizy maro fa anisan'ireo zavamaniry maro dia afaka mahita ilay mpanampy voalohany ao amin'ny ratra - mpanefy, fantatra amin'ny fahafahany manakana ny fandatsahan-dra. Raha ny marina, ity orinasa ity dia manana karazana zava-mahasoa maro kokoa. Ny sira ny plantain koa dia ampiasaina amin'ny tanjona kosmetika.
Ahoana ny fomba hanomanana sira amin'ny planeta?
Mba hanamboaran-jaza, ilaina ny maka ny ravina vaovao sy ny fanangonana azy ireo dia atolotra amin'ny volana Mey ka hatramin'ny Septambra. Tsy afaka mamaha ny zavamaniry eny akaikin'ny lalana sy ny zavamaniry ianao, satria tsy ilaina izany, fa manimba ny fahasalamana. Hetezo ravina vaovao sy tanora. Misy toro-làlana mikasika ny fomba famongorana ny jiosy avy amin'ny planeta:
Mamindra tsara ny rano, rano amin'ny rano mangatsiaka mba hanesorana ny mikraoba, ary maina. Sorenaho izy ireo amin'ny mofomamy hena na ao anaty blender, ary avy eo, amin'ny alàlan'ny ranom-boasary, dia manosika ny sira.
Afaka mampiasa jiro ianao, nefa manosika ny mofomamy, satria mbola mitahiry rano.
Ny siramamy vokarina dia tsy maintsy arovana amin'ny hafanana farafahakeliny, mandritra ny 3-5 minitra. Ataovy izany aorian'ny fanadiovana azy ao amin'ny vata fampangatsiahana ao anaty fitoeran-glasy. Ny zava-mahadomelina dia mety ho ampiasaina mandritra ny 3-6 volana.
Azo atao ny miaro jiro, mifangaro amin'ny alikaola na vodka, ary mampifangaro ny singa mitovy amin'ny isa mitovy. Esory amin'ny rano alohan'ny fampiasana azy.
Ny jiro mpanangom-bokatra dia azo vidiana ao amin'ny pharmacy, ary hisy 96% ny toaka. Ho an'ny fandraisana an-tanana dia ilaina ny manilika azy io toy izany: 1 tbsp. sotro anaty rano mafana 50 ml.
Sakafom-boankazo - fananana medikaly
Ny endrik'io zavamaniry io dia azo lazaina mandritra ny fotoana lava, satria ampiasaina amin'ny fitsaboana aretina isan-karazany. Ny lisitra maina, momba ny zavatra ilaina amin'ny ranom-boasary:
Misy vokany miteraka hemôstatika izy io, satria mampitombo ny taham-pahavitrihana.
Miara-miasa amin'ny bakteria sy viriosy, ary misaotra ny fisian'ny phytoncides sy ny vatana.
Ampiasaina toy ny zava-mahadomelina manohitra ny atidoha izy io, manampy amin'ny fiatrehana ireo areti-nify mahatsiravina isan-karazany. Ho an'ireny tanjona ireny dia azo ampiasaina anaty sy ivelany izany.
Ny mpahay siansa dia nahatsikaritra ny fiantraikan'ny sokatra plastika, noho izany, dia afaka mampihena haingana ny fanaintainana sy ny spasm.
Ny firaiketam-behivavy manankarena sy miavaka dia miantraika amin'ny fiarovana ny vatana.
Misy fiantraikany tsara eo amin'ny rafi-pitabatabana, ary afaka miasa amin'ny lafiny roa ny sira. Raha ampiasaina amin'ny habetsahana be loatra amin'ny alahelony, dia hampitony, ary amin'ny famerimberenan'ny relative - feo.
Izany dia mahazatra ny metabolisma, izay manan-danja ho an'ny olona te hanala lanja.
Amin'ny fampiasana tsy tapaka dia azonao atao ny mampihena ny kolesterola ratsy ao amin'ny ra .
Zana-kazo namboarina - famantarana ny fampiasana azy
Ny zavamaniry dia efa nampiasaina hatramin'ny tranga fahiny hahitana aretina isan-karazany. Raha hitady izay sotroina amin'ny jiosy, dia ilaina ny manonona ny sehatra fampiharana toy izao:
Ny mpitsidika dia manatsara ny asan'ny bronchi sy ny rafitra, ary miteraka ny fandikana ny lefombe, mba hilazana izany amin'ny hotezy.
Ny fanandramana dia mampiseho fa raha ny tsy fahampian'ny vehivavy dia vokatry ny aretina amin'ny asan'ny oviana, dia ilaina ny maka ny jiro planteana.
Ao anatin'io lisitra io, momba ny zavatra azo tsoahina amin'ny ranom-boaloboka, dia tsara ny manonona ny fahaizany manala ny aretin'andoha sy ny nify.
Misaotra ny hetsika sedraina, afaka mampiasa amin'ny adin-tsaina matetika ianao ary mitombo ny fahasosorana.
Zana-biraon-kibo ho an'ny vavony
Ny fanadihadiana dia naneho fa ny fanafody dia mahomby amin'ny aretina maro ao amin'ny rafi-pandaminana, fa zava-dehibe ihany koa ny mitadidy fa azo alaina fotsiny ho an'ny ati-doko miaraka amin'ny fihenan'ny sida. Zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba fisotroana ranon-java-manitra amin'ny aretina mitaiza amin'ny aretina mitaiza mba tsy hanimba ny fahasalamanao. Ny vokatra namboarina dia tokony alaina amin'ny tavy 1. tsatokaty am-bava iray vantotr'omby. Ny fitsaboana dia 2-3 herinandro.
Sakafo misy pancreatitis
Ny fanandramana dia nanamarina fa mampihena ny feon'ny tsinay sy ny vavony ny zavamaniry, mampihena ny fiteran'ny mucosa ary mametra ny famokarana jasan'ny gaza. Ny fikarakarana ny jiosy botana dia mahomby noho ny fahafahany manatsara ny dingan'ny famerenana indray ny vatana voan'ny aretina ary hanaisotra ny dingan'ny fiterahana. Diniho ireto fitsipika vitsivitsy ireto:
Arotsaho ao anaty toerana mangatsiaka ny sira vao voapoizina ary tsy mihoatra ny telo andro.
Raha toa ka matevina loatra izany dia afoy amin'ny rano mitovy.
Zava-dehibe ny mahafantatra ny fomba hahazoana sira psyllium. Misotroa amin'ny sotro lehibe roa ao anatin'ny 20 minitra. alohan'ny sakafo dia in-telo isan'andro.
Mba hahazoana vokatra tsara dia mila mandeha 15 ka hatramin'ny 30 andro ianao.
Zana-kazo namboarina avy amin'ny fikorontanana
Ny mpahay siansa dia nametraka ny fahaizan'ilay zavamaniry hamerenana ny mikroflor ao amin'ny tsinay, mikraoba mikraoba ary manaisotra poizina. Sakafom-bary manify no ampiasaina ho an'ny tavy 1. Tavoahangy intelo talohan'ny sakafo. Aza mandany fotoana ela be toy izany. Na izany aza dia azo atao ny maka voa avy amin'ny zavamaniry iray izay mihinana ranon-tsolika izay mampivoatra ny fanalefahana ny gazoala.
Sakafo mitovitovy amin'ny hatsiaka
Ho an'ny fitsaboana ny ratra sy ny soritr'aretina mampiaraka, dia azo ampiasaina ny karazam-borona isan-karazany. Ny vokatra dia ny ranom-boankazo vokatry ny hatsiaka iombonana, izay tsy azo ampiasaina amin'ny endriny madio, satria mety hitranga ny fahasimbana amin'ny moka. Apetraho amin'ny habetsahana mitovy amin'ny rano voatsindry ary avereno ao anaty 3-4 isaky ny andro ny fampidirana ny orona telo.
Ny aretina tenda mahazatra dia ny aretin'ny raboka, izay miteraka virosy sy aretina. Mba hiadiana amin'izy ireo dia azonao atao ny mampiasa fanafody medikaly, izay misy vokany bakterizidana sy antiviral. Mba hahazoana vokatra tsara amin'ny fitsaboana, dia ilaina ny manomana sira manokana.
Ho an'ny fanafody volom-borona, ny fitomboan'ny ranom-boasary misy tantely dia mitovy amin'ny habeny.
Rehefa avy nifangaro hatramin'ny homogenous, dia alefaso mandritra ny 15-25 minitra.
Arovy ny siram-pihariana aterina ao anaty fitoeram-pikirakirana mihidy ao anaty toerana maizina.
Mbola mila mahatakatra ny fomba fisotroana ny ranom-boasary. Raiso ny rongony intelo isan-andro ho an'ny 2 tbsp. tavoahangy talohan'ny sakafo.
Sakafo avy amin'ny planeta amin'ny cosmetology
Ny hasarobidiny amin'ny tanjona kosmetika, dia mendrika ny fisian'ny flavonoids, vitamins, tazo ary organiques ascétée ity vokatra ity. Ny fampiasana siramamy nambolena dia noho ny fahaiza-manaony mitondra ny tsindrona marefo, manalefaka ny epidermis, ny kisendrasendra malefaka ary ny fery fahasitranana. Alohan'ny hampiasana ny vokatra voafantina dia manolo-kevitra ny hanao fitiliana amin'ny alèjy amin'ny fampiharana sira kely kely amin'ny tendron'ny elatra ary mitandrina ny mety ho fihetsiketsehana. Rehefa misy fery, faniriana na fitsikerana, dia tsara kokoa ny mandà ny fampiasana kalsika voajanahary.
Zana-jiolahy manohitra haratsiam-panahy
Vitsy ny olona mahafantatra fa ny lisitr'ireo toetra fanasitranana amin'ny planeta dia misy ihany koa ny vokatra manavotra. Izany dia noho ny fisian'ny asidra ao amin'ny zavamaniry izay mandray anjara amin'ny fanafoanana ny fihenan'ny mimika sy ny taona. Azo ampiasaina amin'ny fisorohana ny sokatra amin'ny plastika ho an'ny tarehy, ary manampy kely ny crème na ny vokatra hafa. Mba hampihenana ny endriky ny kankana efa misy, dia asaina averinao mazàna ity masoko ity (2-3 na in-dray mandeha isan-kerinandro).
ravina voninkazo - 1 ampahany;
rano - ampahany 3.
Hamafiso ny ravina ary atsipazo amin'ny rano mangotraka. Asio afo kely, ento am-bavany, ary avy eo, mahandro minitra vitsy.
Raiso ny gasy ary apetaho eo amin'ny elany telo ary ataovy fehiny ny maso sy ny vava. Ajanony ny masony, ary apetraho eo amboninao izany. Tazony 20 minitra ilay saron-tava, ary sasana avy eo.
Ny zavamaniry mirakitra dia mety ho fototry ny fiomanana ny vokatra isan-karazany izay hanampy amin'ny fiatrehana olana amin'ny kosmetika, ohatra, ny fako. Ny siramamy namboarina voasesika dia mety ho fototry ny loto ilaina, izay manampy vodka kely ho azy. Mampiasà azy indroa isan'andro, manodina ny faritra misy olana. Safidy iray hafa koa ny manomana ny loto amin'ny ronono.
ronono - ampahany 10.
Avelao haka ny ravina amin'ny tananao, ary avelao ny ranom-boankazo ary hameno azy amin'ny ronono.
Miantehy mandritra ny 20 minitra, ary avy eo manindrona. Mijanona ao anaty kamiao mandra-pamoakan'ny ronono. Noho ny fialan-tsasatra fohy toy izany, aza manambola loatra. Ampiasao, ary koa loto fanahy.
Tsy ny olon-drehetra no avela hampiasa ny ranon'ity zavamaniry ity, izay vao mifangaro amin'ny alikaola. Misy lisitra sasantsasany, izay manimba ny saka amin'ny planeta:
Raha eo amin'ny tosidra, izay mampitombo ny asidra ny sira vaventy .
Raha misy tsy fandeferana ny olona iray dia mety hipoitra, alahelo, fanaintainana eo amin'ny vavony sy ny sisa.
Olona manana rà avo sy hypertension.
Vehivavy any amin'ny toerana sy ny fampinonoana.
Amin'ny hafanana ambony, izay maharitra maharitra telo andro.
Amin'ny lafiny ivelany, tsy tokony hampiasaina ny ranom-boasary misy tsindrona trombôs.
Tsy afaka maka japoney ianao mandritra ny fotoana maharitra sy be dia be.
Parmelia - fampiasana sy fanoherana
Nahoana no ilaina ny rano ranomasina?
Lila amin'ny fanafody
Anis - toetra mahasoa sy fanoherana
Tainkintana ny kesika taorian'ny dian-tongotra
Fitsaboana gout amin'ny soda baking
Ny voninkazo mandimandina - toetra tsara ho an'ny fitsaboana sy ny fanadiovana
Ny menaka masikan'i Md John
Fitsaboana amin'ny kerosene
Tandindomin-doza - fananana ara-pahasalamana sy fanoherana ny aretina isan-karazany
Valisiana officinalis - fampiharana amin'ny fitsaboana amin'ny olona
Vovoka miaraka amin'ny lalan-drà varikose amin'ny faravodrano ambany - fitsipika manan-danja
Ny fomba hananganana raozy amin'ny tsapa amin'ny fehezam-boninkazo - dia mamorona zaridaina iray izahay miaraka amin'ny tananay
Atongilano ny volokom-borona amin'ny zaza
Puff pastry misy koba
Kiraro Sorel - kiraro maoderina ho an'ny tsirony rehetra
Kisoa amin'ny voditongotra - fitsaboana amin'ny peroxyde
Ny fo anana - fanatsarana sakafo
Grunge fomba amin'ny akanjo
Fanomezana zazavavy 5 taona
Herinandro masina - famantarana ary inona no tsy tokony hatao?
Amin'ny akanjo hanaovana akanjo hoditra?
Kofehy amin'ny volon'ondry
Ahoana ny fomba hanasana zavatra simenitra?
Karazana hazo fihinam-boa
Karazana sakafo inona no bevohoka Serena Williams bevohoka?
Aising amin'ny gingerbread
Torkia any Torkia
Cookie Shortbread - recipe
Sakafo ho an'ny gout - menamena manakaiky
Diathese amin'ny zaza vao teraka
Vitamina ao Persimmons
Ny valan-javaboarin'i Ben Lomond